अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्री टर्न्बुलसँग फोनमै बाझे राष्ट्रपति ट्रम्प - Karobar National Economic Daily
अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्री टर्न्बुलसँग फोनमै बाझे राष्ट्रपति ट्रम्प
query_builderFebruary 2, 2017 8:05 PM supervisor_accountकारोबार visibility5556
अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प । तस्बिर: रोयटर्स
शरणार्थी मामिलामा खराब वार्ता भयो भन्दै काटे फोन
वासिङ्गटन: डोनाल्ड ट्रम्प केही दिनयता विश्वका नेताहरुसँग फोनवार्तामा व्यस्त रहेका छन् । ट्रम्पले अमेरिकन नीति भन्दा बाहिर गएर विश्व नेताहरुसँग फोनवार्ता गरिरहँदा उनी निरन्तर चर्चामा पनि आइरहेका छन् ।
अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्रीसँग भएको पहिलो टेलिफोन सम्वादमा ट्रम्प बाझ्न पुगेका छन् । अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्री म्याल्कम टर्न्बुलसँग टेलिफोन वार्ताका क्रममा ट्रम्पले एकाएक फोन काटिदिए ।
दुवै नेताबीच करिब एक घन्टा वार्ता हुने गरी विभिन्न एजेन्डा तय गरिएका थिए । तर दुई नेताबीच केबल २५ मिनेटमात्रै वार्ता हुन सक्यो । ट्रम्पले अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्रीलाई पहिलो टेलिफोन वार्तामै अहिलेसम्म सबैभन्दा खराब कुराकानी भएको भन्दै रिसले २५ मिनेटमै फोन काटिदिए ।
शरणार्थी सवालले तनाव
वासिङ्गटन पोस्टको रिपोर्ट अनुसार ट्रम्प र टर्नबुलबीच शरणार्थी सम्झौतालाई लिएर टेलिफोन वार्ता यही शनिवार भएको थियो ।
यो सम्झौता अनुसार अस्ट्रेलियाको एक थुना केन्द्रमा रहेका एक हजार दुई ५० शरणार्थीलाई अमेरिका लानुपर्ने थियो । टर्न्बुलले ट्रम्पसँगको कुराकानीमा यो सवाल पनि उठाएका थिए ।
ट्रम्पले यसको जवाफमा भने, "यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खराब सम्झौता हो ।'' ट्रम्पले कुराकानीका क्रममा टर्न्बुलमाथि उनी बोस्टनमा अर्को बम हमला गर्नेवालाई अमेरिकामा पठाउने प्रयास गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाए ।
दुई नेताबीच करिब एक घन्टा कुराकानी हुनुथियो तर ट्रम्प २५ मिनेटमै फोन काटिदिए ।
ट्रम्पले टर्न्बुलसँग भने, ''मैले तपाईँ भन्दा पहिला अरु चार देशका नेतासँग कुराकानी गरिसकेको छु । यिनमा भ्लादिमिर पुटिन जस्ता नेता पनि सामेल छन् । तर यी सबैमा सबैभन्दा खराब कुराकानी तपाईँसँग भयो ।''
ट्रम्पले ट्वीट गर्दै अस्ट्रेलियासँग भएको यस सम्झौताबारे प्रश्न उठाएका थिए । बुधवार राति ट्रम्पले यसै मुद्दामा एक ट्वीट गरेका थिए । "तपाईँ एकिन गर्न सक्नु्हुन्छ यसमा ? ओबामा प्रशासन अस्ट्रेलियाबाट हजारौँ शरणार्थीलाई अवैधरुपमा अमेरिका लानका लागि मञ्जुर भएको थियो । म यस खराब सम्झौताबारेमा गहिराईमा पुगेर अध्ययन गर्नेछु ।''
के भने अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्रीले ?
टर्न्बुलले आफूसँग ट्रम्पले रुखो स्वरमा कुराकानी गरेपनि तर अमेरिकाले यसअघि नै अस्ट्रेलियन थुना केन्द्रबाट १२५० शरणार्थीलाई स्वीकार्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेको कुरा उल्लेख गरे ।
अस्ट्रेलियामा अन्य देशबाट डुङ्गामार्फत आउने शरणार्थी प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अस्ट्रेलियन थुना केन्द्रमा रहेका अधिकांश शरणार्थी इरान र इराकका रहेका छन् ।
यी दुबै मुस्लिम अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएका सात देशमध्येमा पर्छन् । यी देशबाट अमेरिका छिरेर पीआर लिएका नागरिकलाई ट्रम्पले ९० दिनसम्म अमेरिका छिर्नमा प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् ।
यीनै शरणार्थीलाई अमेरिकामा प्रवेश दिनका लागि ओबामा प्रशासनले अस्ट्रेलियन सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो । ओबामाले आखिर किन यी शरणार्थीलाई प्रवेश अनुमति दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ? यसबारे पनि ट‍्रम्पले प्रश्न उठाएका थिए ।
अमेरिकन पत्रिकाले यसो भने
द न्यूयोर्क टाइम्सले यसबारेमा समाचार लेख्दै यो कुराले दुई देशबीच कुटनीतिक तनाव बढ्नेतर्फ चिन्ता जनाएको छ । 'ट्रम्प र अस्ट्रेलियन प्रमबीच फोन कलपछि दुबै देशबीच कुटनीतिक टकराव हुने खतरा छ । दुबैले शरणार्थी नीतिलाई लिएर एकअर्कोलाई तिखा शब्दको प्रयोग गरेका छन् ।'
द वासिङ्गटन पोस्टले ट्रम्पले विश्व नेताहरुसँग रुखो स्वरमा प्रस्तुत भइरहेको उल्लेख गरेको छ । 'ट्रम्पले विश्व नेताहरुसँग रुखो स्वरमा कुरा गर्दैछन् । उनी अमेरिकाकै सहयोगी देशका नेताहरुसँग पनि रुखो शैलीमा प्रस्तुत हुने क्षमता पनि राख्छन् । उनी बोली र ट्विटरमार्फत लगातार राजनीतिक विरोधी र सञ्चार संगठनलाई कटघरामा खडा गराइरहन्छन् ।'
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका अस्ट्रेलिया